ရှီယာ မူဆလင်၏ သမိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ စကီဖှာမှ ကရ်ဘလာသို့
၃.၂ ကွဲပြားခြင်းနှင့် madh 'habs
မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် မက္ကာြမို့မှ မဒီနာမြို့သို့ မထွက်ခွာမီ မက္ကာမြို့တွင် မိမိတို့အကြားစည်းရုံးညီညွတ်ကြရန် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့လေသည်။ထို့နောက် အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ကြီးပေါ်၌ နေထိုင်ကြသော အာရဗ်တို့အကြား တစ်စုတစည်းတည်းဖြစ်စေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့လေသည်။သို့သော် အေဒီ(၆၃၂)ခုနှစ် မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)ကွယ်လွန်တော်မူသည်နှင့်တပြိုင်နက် မွစ်လင်(မ)ထုကြီးအကြား ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြလေသည်။မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)ကွယ်လွန်သွားခဲ့ချိန်တွင် မိုဟမ္မဒ်သခင်၏ဦးရီးတော်၏သား အလီအိဘ်နေအဘီသွာလိဘ်(အ.စ)နှင့် သမီးတော်ဖှာတေမာ(စ.အ)တို့အပြင် ၎င်းတို့နှစ်ဦး၏သားသမီးများသည် မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)၏ ဈာပနအခမ်းအနားအတွက် အလုပ်များနေခဲ့ချိန်ဖြစ်ပေသည်။ထိုအချိန်တွင် တစ်ဘက်၌ မက္ကာမြို့မှ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သော မျိုးနွယ်စုတို့၏ခေါင်းဆောင်များနှင့် မဒီနာမြို့တွင်ယခင်ကတည်းမှ နေထိုခဲ့သော မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်များအကြား စကီဖှာ မည်သော နေရာတွင် မည်သူကိုမျှအသိမပေးပဲ တိတ်တစိတ် ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ပွဲ ပြုလုပ်နေခဲ့ကြလေသည်။ (သို့သော် ဂဒီးရ်-ရေ-ခွမ်ဆိုသော နေရာတွင် အလီအိဘ်နေအဘီသွာလီဘ်(အ.စ)အား မိမိနောက်ပိုင်းဆက်ခံမည့်သူ ဟူ၍ မွစ်လင်(မ)တို့အကြား အများသိအောင်ကြေငြာခဲ့လေသည်။ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ အိုမရ်သည် ထိုပထမဆုံး မင်္ဂလာစကားပြောကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ရှိရှိသမျှသော မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်များနှင့် သာဝကတို့အား အလီ(အ.စ)နှင့် သစ္စာခံရန် တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)မှ မိန့်ကြားခဲ့မှုကြောင့် ထိုနေရာ၌ ၎င်းသူအားလုံးတို့သည် အလီ(အ.စ)နှင့် သစ္စာခံ(ဘိုင်အသ်)ပြုလုပ်ခဲ့ကြလေသည်။) ၎င်းတို့၏ထိုလုပ်ရပ်သည် ဂဒီးရ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သစ္စာခံမှုကို ချိုးဖေါက်၍ မိမိတို့သဘောဆန္ဒများအရ အစ္စလာမ့်ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ထိုသို့ဖြင့် အဘူဘက်ရ်အား ခလီဖှာ (မွစ်လင်(မ))တို့၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ကြလေသည်။ ထို့နောက် မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)၏ အနွယ်တော်ဝင်တို့နှင့် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့် သူ၏အနွယ်တော်ဝင်များကို ချစ်ခင်ကြည်ညိုလေးစားသူတို့သည် ထို့သို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့မှုအပေါ် ( မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)၏မှာကြားမှုကို အလေးမထားခဲ့သည့်အတွက်) စောဒကတက်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြလေသည်။စွန္နီတို့၏ခံယူချက်တွင် မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် မည်သူကိုမျှ မိမိနောက်ဆက်ခံမည့်သူကို သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ ဟုဖြစ်သော်လည်း ရှီအာတို့အကြားခံယူထားကြသည်မှာ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် မိမိနောက်ဆက်ခံသူသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို နေရာဒေသအသီးသီးနှင့် အနေအထားအမျိုးမျိုးတို့တွင် အကြိမ်ကြိမ် အမည်နာမတော်နှင့် တကွဖြစ်ပြခဲ့လေသည်။ထိုသူသည်အလီ(အ.စ)ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ယုတ်စွအဆုံး တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်သည် မိမိ၏နောက်ဆုံးအချိန် အိပ်ယာအတွင်းလဲနေချိန်တွင် အလီ(အ.စ)သည် မိမိနောက်ဆက်ခံမည့်သူဖြစ်ကြောင်း အမည်နာမတော်နှင့်တကွ သတ်မှတ်၍ မှားသွားခဲ့လေသည်။ဟုဖြစ်လေသည်။စကီဖှာတွင်
အဘူဘက်ရ်အား ခလီဖှာအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်သည့်နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာသည် အိုမရ်နှင့် ခါလီဒ်အိဘ်နေဝလီးဒ်တို့ဦးခေါင်မှုဖြင့် သခင်မကြီးဖှာတေမာ(စ.အ)အိမ်အား မီးရှို့၍ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သည့် ပြဿနာအကြောင်းအရာပင်ဖြစ်လေသည်။မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် မက္ကာမြို့မှ မဒီနာမြို့သို့ မထွက်ခွာမီ မက္ကာမြို့တွင် မိမိတို့အကြားစည်းရုံးညီညွတ်ကြရန် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့လေသည်။ထို့နောက် အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ကြီးပေါ်၌ နေထိုင်ကြသော အာရဗ်တို့အကြား တစ်စုတစည်းတည်းဖြစ်စေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့လေသည်။သို့သော် အေဒီ(၆၃၂)ခုနှစ် မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)ကွယ်လွန်တော်မူသည်နှင့်တပြိုင်နက် မွစ်လင်(မ)ထုကြီးအကြား ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြလေသည်။မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)ကွယ်လွန်သွားခဲ့ချိန်တွင် မိုဟမ္မဒ်သခင်၏ဦးရီးတော်၏သား အလီအိဘ်နေအဘီသွာလိဘ်(အ.စ)နှင့် သမီးတော်ဖှာတေမာ(စ.အ)တို့အပြင် ၎င်းတို့နှစ်ဦး၏သားသမီးများသည် မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)၏ ဈာပနအခမ်းအနားအတွက် အလုပ်များနေခဲ့ချိန်ဖြစ်ပေသည်။ထိုအချိန်တွင် တစ်ဘက်၌ မက္ကာမြို့မှ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သော မျိုးနွယ်စုတို့၏ခေါင်းဆောင်များနှင့် မဒီနာမြို့တွင်ယခင်ကတည်းမှ နေထိုခဲ့သော မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်များအကြား စကီဖှာ မည်သော နေရာတွင် မည်သူကိုမျှအသိမပေးပဲ တိတ်တစိတ် ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ပွဲ ပြုလုပ်နေခဲ့ကြလေသည်။ (သို့သော် ဂဒီးရ်-ရေ-ခွမ်ဆိုသော နေရာတွင် အလီအိဘ်နေအဘီသွာလီဘ်(အ.စ)အား မိမိနောက်ပိုင်းဆက်ခံမည့်သူ ဟူ၍ မွစ်လင်(မ)တို့အကြား အများသိအောင်ကြေငြာခဲ့လေသည်။ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ အိုမရ်သည် ထိုပထမဆုံး မင်္ဂလာစကားပြောကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ရှိရှိသမျှသော မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်များနှင့် သာဝကတို့အား အလီ(အ.စ)နှင့် သစ္စာခံရန် တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)မှ မိန့်ကြားခဲ့မှုကြောင့် ထိုနေရာ၌ ၎င်းသူအားလုံးတို့သည် အလီ(အ.စ)နှင့် သစ္စာခံ(ဘိုင်အသ်)ပြုလုပ်ခဲ့ကြလေသည်။) ၎င်းတို့၏ထိုလုပ်ရပ်သည် ဂဒီးရ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သစ္စာခံမှုကို ချိုးဖေါက်၍ မိမိတို့သဘောဆန္ဒများအရ အစ္စလာမ့်ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ထိုသို့ဖြင့် အဘူဘက်ရ်အား ခလီဖှာ (မွစ်လင်(မ))တို့၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ကြလေသည်။ ထို့နောက် မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)၏ အနွယ်တော်ဝင်တို့နှင့် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့် သူ၏အနွယ်တော်ဝင်များကို ချစ်ခင်ကြည်ညိုလေးစားသူတို့သည် ထို့သို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့မှုအပေါ် ( မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)၏မှာကြားမှုကို အလေးမထားခဲ့သည့်အတွက်) စောဒကတက်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြလေသည်။စွန္နီတို့၏ခံယူချက်တွင် မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် မည်သူကိုမျှ မိမိနောက်ဆက်ခံမည့်သူကို သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ ဟုဖြစ်သော်လည်း ရှီအာတို့အကြားခံယူထားကြသည်မှာ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် မိမိနောက်ဆက်ခံသူသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို နေရာဒေသအသီးသီးနှင့် အနေအထားအမျိုးမျိုးတို့တွင် အကြိမ်ကြိမ် အမည်နာမတော်နှင့် တကွဖြစ်ပြခဲ့လေသည်။ထိုသူသည်အလီ(အ.စ)ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ယုတ်စွအဆုံး တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်သည် မိမိ၏နောက်ဆုံးအချိန် အိပ်ယာအတွင်းလဲနေချိန်တွင် အလီ(အ.စ)သည် မိမိနောက်ဆက်ခံမည့်သူဖြစ်ကြောင်း အမည်နာမတော်နှင့်တကွ သတ်မှတ်၍ မှားသွားခဲ့လေသည်။ဟုဖြစ်လေသည်။
စကီဖှာတွင်အဘူဘက်ရ်အား ခလီဖှာအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်သည့်နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာသည် အိုမရ်နှင့် ခါလီဒ်အိဘ်နေဝလီးဒ်တို့ဦးခေါင်မှုဖြင့် သခင်မကြီးဖှာတေမာ(စ.အ)အိမ်အား မီးရှို့၍ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သည့် ပြဿနာအကြောင်းအရာပင်ဖြစ်လေသည်။ထိုပြဿနာသည် မွစ်လင်(မ)ထုအကြားနှစ်ပိုင်းကွဲသွားစေခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် စွန္နီနှင့်ရှီအာဟူ၍ အုပ်စုနှစ်စု ဆင်းသက်လာခဲ့လေသည်။၎င်းတို့အကြားအချို့သည် အလီ(အ,စ)၏နောက်လိုက်များဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီး အချို့သည် အဘူဘက်ရ်၊အိုမရ်နှင့် အွစ်မာန်းနောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။စွန္နတို့ဘက်မှ စောဒကတက်ကြသည်မှာ အကယ်၍ အမှန်တကယ်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ဘက်မှ အလီ(အ.စ)အား ခန့်အပ်ခဲ့သည်ဆိုပါက အလီ(အ.စ)သည် မိမိ၏ရပိုင်ခွင့်ကို ရယူရန်အတွက် အဘယ်ကြောင့် အဘူဘက်ရ်၊အိုမရ်နှင့်အွစ်မာန်တို့အား စစ်မခင်းခဲ့ပါသနည်း ဟုဖြစ်လေသည်။ ၎င်းမေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှီအာတို့ဘက်မှ ဖြေကြားထားသည်မှာ - ပထမအနေဖြင့် အလီ(အ.စ)ဘက်၌ စစ်ခင်းနိုင်ဖို့ရန် စစ်သည်အင်အား မရှိခဲ့ပါ။ ဒုတိယအနေဖြင့် အလီ(အ.စ)သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကြိုးပမ်း၍ တည်ဆောင်ခဲ့သော အစ္စလာမ့်အုပ်ချုပ်ရေးသည် အလွန်မှပင် သက်တမ်းအားဖြင့် နုသေးပေသည်။ ထိုသို့သောအနေအထားတွင် စစ်ခင်းမည်ဆိုပါက မကြာသေးမီမှ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော အစ္စလာမ့်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သည် ပြန်လည်ပျက်စီးသွားမည်ကို မလိုလားသဖြင့် ၎င်းတို့နှင့် စစ်မခင်းခဲ့ပေဟု ဖြစ်လေသည်။
ရှီအာနှင့်စွန္နီတို့သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ကွယ်လွန်ပြီးနောက် နိုင်ငံရေးပြဿနာအပေါ်မူတည်၍ ကွဲခဲ့သော ဂိုဏ်းများဖြစ်သည်။ရှီအာတို့၏ခံယူချက်တွင် အလီ(အ.စ)သည် ပထမခလီဖှာ ဖြစ်သည်သလို အဘူဘက်ရ်၊အိုမရ်နှင့် အွစ်မာန်းတို့သည် ရာထူးနှင့် အရိုက်အရာကို မတရားသိမ်းပိုက်လုယူထားသူများဖြစ်သည် ဟု ဆိုထားသည့်အတွက် ထို(၃)ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏ဘက်တော်သားတို့မှ ဆင့်ပြန်ထားသော ဟဒီးစ်တိုင်းကို ရှီအာဟဒီးစ်ပညာရှင်များမှ စစ်မှန်သောဟဒီးစ်ဟူ၍ မသတ်မှတ်ကြပေ။
ထို့အတွက်ကြောင့် ရှီအာတို့အကြား စစ်မှန်ကြောင်းထောက်ခံထားသော ဟဒီးစ်တော်များသည် စွန္နီတို့အကြား စစ်မှန်သည်ဟု ထောက်ခံထားသော ဟဒီးစ်တော်များထက် နည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရပေသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆို့သော် မြောက်များစွာသော ဟဒီးစ်တို့သည် ရှီအာတို့အဖို့လက်ခံနိုင်သည့်အရည်အချင်းနှင့် မပြည့်မီသောအတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်။ရှီအာတို့သည် အထူးသဖြင့် နမားဇ်အပြင် ထိမ်းမြားမှုနှင့် စပ်ဆိုင်သော ၎င်းတို့မှ ဆင့်ပြန်ထားသော ဟဒီးစ်တော်များကို ထောက်ခံထားခြင်းမရှိချေ။ရှီအာတို့သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့် သူ၏အနွယ်တော်ဝင်များထံမှ လာရှိထားသော ဟဒီးစ်တော်များကိုသာ ဦးစားပေးကြလေသည်။
(Family tree ) Khadija bint Khuwaylid `Alî al-Mûrtdhā Khawlah bint Ja'far ʿAbd Allâh
Umayyad Caliphate Uthman ibn Abu-al-Aas
ကွဲပြားခြင်းနှင့် madh 'habs[ပြင်ဆင်ရန်]
Holt, P. M. (1977a). Cambridge History of Islam, Vol. 1. Cambridge University Press. ISBN 0521291364။
Lapidus, Ira (2002). A History of Islamic Societies, 2nd, Cambridge University Press. ISBN 978-0521779333။
Madelung, Wilferd (1996). The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate. Cambridge University Press. ISBN 0521646960။
Tabatabae, Sayyid Mohammad Hosayn (1979). Shi'ite Islam, Seyyed Hossein Nasr (trans.), Suny press. ISBN 0-87395-272-3။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှီယာ_မူဆလင်၏_သမိုင်း&oldid=428923" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၈:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။